वर्थ डे पार्टीको रमझममा आमाले छोरीलाई विर्सेपछी जे भयो …. – Namaste Host
April 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on वर्थ डे पार्टीको रमझममा आमाले छोरीलाई विर्सेपछी जे भयो ….
एजेन्सी, २५ चैत्र । वेलायतमा डिसेम्वर २०१९ मा घटेको एउटा घटना हो यो । वाली वेर्फि कुदी नामक महिलाले आफ्नो १८ वर्षको वर्थ डे पार्टी मनाउन घरमा सानी छोरीलाई छोडेर गएकी थिईन् । उनि पार्टीको रमझममा यस्तरी रमाइन् कि आफ्नो सानी छोरीको यादै गर्न सकिनन् ।
सीसीटिभि फुटेजको आधारमा उनि ६ दिन पछि घर फर्केको देखिन्छ । घर फर्किंदा उनकी छोरीको मृत्यू भईसकेको थियो । प्रहरीले कोर्टमा सीसीटिभिको फुटेज पेश गरेका छन् । जसमा उनी कोवेन्ट्री र सोहीहुलमा पार्टीमा भाग लिंदै गरेको देखेकी छिन् ।
साथै उनि छ दिन पछि घर फर्केर हेर्दा वच्ची उठिनन् र ९९९ मा फोन गरिन र रोयल एलेक्जेन्ड्रा चिल्ड्रेल हस्पिटल लगिन्, जहा वच्चीलाई मृ त घो षित गरिदियो । वच्चीको मृत्यु पछि पोष्टमार्ट गरे जसमा वच्चाको मृत्यू राम्रो सँग ध्यान नदिएकोले भएको पुष्टि हुन पुग्यो । उक्त महिलाले पनि आ रो प स्वि कार गरेकी छिन् र अव कोर्टले उनको स जा यको फैसला गर्नेछ ।
यो पनि, अमेरिकी सबै वयस्कले अप्रिल १९ बाट कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने
२५ चैत , अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्धारा अमेरिकाका सबै जना वयस्क नागरिकले पनि आगामी अप्रिल १९ तारिखदेखि कोरोनाका विरुद्धको खोप पाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।